कठघराबाटै डा. केसीले भने: पराजुली भ्रष्ट र माफियानै हुन् – Nepal Japan
नेपाली समय : 03:38:02
जापानी समय : 06:53:02
Tag: कठघराबाटै डा. केसीले भने: पराजुली भ्रष्ट र माफियानै हुन्
कठघराबाटै डा. केसीले भने- ‘पराजुली भ्रष्ट र माफिया नै हुन्’
डा गोविन्द केसीले सर्वोच्च अदालतको कठघराबाटै प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली भ्रष्ट भएको बताएका छन्। उनले पराजुली भष्ट भएको र आफुले पुष्टि गर्न सक्ने बताएका हुन्।
बयान दिने क्रममा डा केसीले आफूले प्रधान न्यायाधीश पराजुलीलाई भ्रष्ट र माफिया भनेको स्वीकार्दै भने, ‘म सार्वभौम देश्को नागरिक हुँ। मलाई वाक स्वतन्त्रताको अधिकार छ। मैले पराजुलीलाई माफिया र भ्रष्ट भनेकै हुँ।’
केसीविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना मुद्दाको सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र वमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा बहस भइरहेको छ। अदालतको आदेशमा प्रहरीले केसीलाई सोमबार पक्राउ गरेको थियो। मंगलवार अदालतमा उस्थिति गराएका केसीको बयान सकिएपछि आजबाट बहस भइरहेको छ।
गलत गोविन्द केसी कि सर्वोच्चको फैसला र रातारातको गिरफ्तारी ?
Posted in जन सरोकारTagged कठघराबाटै डा. केसीले भने: पराजुली भ्रष्ट र माफियानै हुन्